Anotambanudza asati arara - ndeapi anonyanya kuratidzwa? | Bezzia
Anotambanudza asati arara: ndeapi anonyanya kuratidzwa?
Susana godoy | 11/05/2021 16:00 | Exercise
Iwe unoziva zvakanakira kutambanudza usati warara? Zvakanaka, kubva nhasi, zvirokwazvo hakuzove nezuva rimwe chete rausina kuzviita, usati waenda kumba. Nekuti iwo ane akawanda mabhenefiti uye, uyezve, iwo zvakare ari akawanda iwo iwo asingazombotinha.
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoenda kunorara uye vanowira vakatenderera, saka iwe unofanirwa kugara uchitsvaga kwenguva pfupi zvisati zvaitika. Asi kana, kune rumwe rutivi, uine hope, iwe uchavatenda zvikuru kupfuura nakare kose. Chero mamiriro ako ezvinhu, iwe unofanirwa kunakirwa nezvakanaka zvekutambanudza usati warara. Takatanga!
1 Kubatsirwa kwekutambanudza usati warara
2 Iyo yakanakisa inotambanudzwa usati warara
Kubatsirwa kwekutambanudza usati warara
Kutambanudza inogara iri chikamu chakakosha pane chero kudzidziswa kwakakosha munyu wayo. Asi pamusoro peizvi, kana tichitaura izvo zvinowanzoitwa usati warara, tichawana zvitsva uye zvakawanda zvakanakira muviri wedu:
Iwe ucharara zvakanyanya zvirinani: Muviri unoda kuwana chiyero, kuzorora nekuzorora. Naizvozvo, chero bedzi zvisingaitike uye tiri mukugara takangwarira, hatizokwanise kukotsira sezvataizoda. Naizvozvo, nekuita kumwe kutambanudza, isu tinogona kuwana ichi chiyero.
Iwe uchabvisa kusagadzikana uye kushushikana: Chimwe chezvikonzero nei tisingarare zvakanaka ndechekuti tinowanzo kuunganidzira kusagadzikana uye tsinga, izvo zvinoita kuti muviri ugumbuke zvakanyanya kupfuura zvakafanira.
Inodzivirira kurwadziwa: Kana muviri watambanudzwa zvakanaka, isu tinosiya kumashure kwekukuvara uye kurwadziwa kwemajoini uyezve, izvo zvibvumirano izvo dzimwe nguva zvinonetsa hupenyu hwedu.
Iyo yakanakisa inotambanudzwa usati warara
Tinotaura sei kurovedza muviri usati warara, uye isu hatidi kutyora yako kutenderera, zvakanakisa kubheja pane mamwe akasununguka uye akatsetseka mafambiro, kazhinji. Uye zvakare, isu hatigone kukanganwa kuti ivo vanofanirwa zvakare kupfupika kuti vaite nani kuita:
Iwe unorara nemusana, maoko ako akapatsanurwa kubva kumuviri wako uye nemakumbo ako akatenderedzwa, unofanirwa kujoina tsoka dzetsoka dzako.. Ino ndiyo nguva yekuparadzira mabvi zvakanyanya sezvaunogona, asi pasina kumanikidza. Tinotora mweya miviri yekufema uye tinodzokera kunzvimbo yekutanga.
Mune ino kesi, iwe uchagara kumashure pazvitsitsinho zvako wozendamira muviri wako kumberi, nemaoko akatambanudzwawo nenzira iyi. Kana iwe usingakwanise kutambanudza zvakawanda, usazvidya moyo. Tarisa pane yakadzika, yakasununguka kufema kwemasekondi mashoma uye zorora.
Iye zvino tave kuzosiyanisa kurovedza muviri, nekuti isu tinoramba tichigara asi ne makumbo akatambanudzwa kumberi uye achidzoka akananga. Isu tinotambanudza kumberi tichiedza kubata matinji eminwe. Izvo hazvina basa kana iwe ukasasvika, nekuti sekusimbisa kwatinoita nguva dzese, haufanire kumanikidza kutambanudza. Edza kusunungura nzvimbo yepafudzi neyemutsipa zvakanyanya sezvinobvira.
Gara wakananga kumusoro kwemubhedha kuti makumbo ako akwire kumadziro. Iyi inzira yakakwana yekuvasunungura mushure mezuva refu uye kubatsira kutenderera kwedu. Rangarira kufema kwemasekondi mashoma uye zorora.
Isu tinorara nemusana wedu zvekare uye mune iyi kesi, isu tinoshandura gumbo rimwe, touya naro pachifuva uye tobata nemaoko maviri. Tinofema, tinosunungura uye tinoita zvimwe chete nerimwe gumbo.
As the mitsipa mitsipa Ivo vanogona zvakare kutamba zvinyengeri patiri, saka isu tinofanirwa kutambanudza. Isu tinoisa ruoko rwerudyi pamusoro uye tinoukomberedza kana kuukomberedza kudivi rimwe chete, asi pasina kudhonza. Ipapo isu tinoita zvakafanana kune rimwe divi.
Nemitambo iyi kare iwe unenge uine kutambanuka kwakanaka kwemuviri wako kuti ugone kurara mune yakasununguka nzira. Zvakanaka, tanga nekutsaurira mashoma mashoma kune yega yega. Asi sezvatinozvidzokorora, hongu tinogona kuwedzera kudzokorora uye nguva. Uchatanga riini navo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Anotambanudza asati arara: ndeapi anonyanya kuratidzwa?
MaPilates Anogona Sei Kuvandudza Hutano Hwako
Caslex Casademunt anogamuchira yake inotarisirwa mutero